Tapatapak'ahitra miaraka @ Shadow: Ala Voly Kely
Ala Voly Kely
Rehefa hierina ny andro dia hotolorana amin'ny fomba ofisialy ilay loka malaza Ballon d'or atolotry ny gazety boky France Football. Ny hampiavaka azy amin'ity taona dia ny mpilalao rehetra maneran-tany no isafidianana izay hahazo izany, ny mpitsara koa dia avy amin'ny vazan-tany efatra. Mba ialana voly kely eto amin'ity sehatra ity dia indreto horonantsary roa : ny iray ahitana an'ingahy Kakà izay azo antoka (raha ny filazan'i Corriere della Sera) fa hahazo ny loka ary tena mendrika izany tamin'ity taona ity, ny iray kosa maneho an'ingahy Maldini, izay angamba tsy hahazo io loka io mihitsy nefa rariny raha deraina ho an'ny vitany hatrizay niaraka tamin'ny Ac Milan.
Categories Why Not
Wednesday, November 28, 2007 at 3:46:00 AM GMT+3
Isaorana ireo izay mankasitraka ity sehatra ity ho safidiana @ Bombs, torak'izany ireo mankasitraka ka mifandray mivantana @ alalan'ny mailaka. Isaorana koa anefa ireo tsy mankasitraka ny hevitra izay voizina eto satria ireny koa dia manosika hatrany @ fanatsarana azy.
Wednesday, November 28, 2007 at 9:50:00 AM GMT+3